laamaha | Almaschool's Blog
Laamaha machadka al-ma’muun
1 mogdisho xarunta
2- degmada guriceel laan
3- degmada dhuusamareeb laan
4- baardheere laan
5- caabduwaaq laan
6- waqooyiga mogdisho laan
=========================================Xasan Macalim Maxamuud Samatar ( Xasan albasri)
Dawrka culimada suufiyada ee sooyaalka waxbarashada somaliya
Machadkaaan oo ku yaalla magaalada Muqdisho oo illaa 8 laamood ku leh goballada Soomaaliya ayaa waxaa la furay sanadkii 2001-dii. Wuxuuna machadku aqoonsi rasmi ah ka helay jaamacadda faca weyn ee Al-azhar shariif ee dalka Masar, iyadoo jaamacadda Azhar ay machadka gacan ka siiso dhanka manahajka iyo shahaadada dugsiyada dhexe iyo sare iyo kan hoose ba. Waxaa xusid mudan in ardeyda ka baxa Machadka Al-ma’muun laga qaddariyo jaamacadda Al;-azhar al � shariif ee maser kutaala
Waxaa Machadka ka qaatay shahaadooyinka dhexe iyo sare ardey ku dhow illaa 600, waxaana wax ka dhiga qaar ka mid ah macalimiintii hore ee dalka. Sidoo kale waxaa machadka laga bixiyaa siminaarro caafimaad iyo aqoonta kaleba isugu jira oo ay bixiyaan khubaro ku takhasusay culuumtaas. Farriinta machadka waa in la nooleeyaa waxbarasho wadata nafci adduun iyo aakhiro , kuna saleysan tariikhii culimada ahlusunna waljamaaca manta cadaw badan oo gudaha iyo dibadda jooga ey rabaan in ey suuliyaan oo ku badalaan mabaadiida ina wahaab uu layimid��.